Zvinyorwa zveMahendra Alladi pamusoro Martech Zone |
Zvinyorwa na Mahendra Alladi
Mahendra ndiye Muvambi uye CEO weacelQ, yegore-based inopfuurira yekuyedza chikuva iyo inogadzikana inogadzirisa API uye webhu kuyedza isina kunyora tambo imwechete yekodhi.
Uchishandisa Kuzviongorora Kwayedza Kuvandudza Chiitiko cheSalesforce
Chipiri, August 4, 2020 Chipiri, August 4, 2020 Mahendra Alladi
Kugara kumberi kweshanduko dzinokurumidza uye kushandurwa mune yakakura-chikamu bhizinesi chikuva, senge Salesforce, zvinogona kunetsa. Asi Salesforce neAccelQ vari kushanda pamwechete kusangana nedambudziko iri. Uchishandisa AccelQ's agile mhando manejimendi manejimendi, iyo inosunganidzwa zvine simba neSalesforce, inomhanyisa zvakanyanya uye inovandudza mhando yekuburitswa kweSalesforce. AccelQ inobatanidza mapuratifomu makambani anogona kushandisa kugadzirisa, kubata, kuuraya, uye kuongorora Salesforce kuyedza. AccelQ ndiyo chete inoenderera bvunzo